दुःखद खबर; जुम्लीहा बच्चा जन्माएर २१ बर्षकी आमा बि’तिन्, बच्चाहरुको यस्तो बि’च’ल्ली – AB Sansar
दुःखद खबर; जुम्लीहा बच्चा जन्माएर २१ बर्षकी आमा बि’तिन्, बच्चाहरुको यस्तो बि’च’ल्ली
September 30, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on दुःखद खबर; जुम्लीहा बच्चा जन्माएर २१ बर्षकी आमा बि’तिन्, बच्चाहरुको यस्तो बि’च’ल्ली
दैव पनि कति नि’ष्ठुरी । किन गरिबलाई नै चो’ट माथि चोट दिन्छौ, भगवान् । किन, यि जुम्ल्याहा नानीहरु जन्मेको ११ दिनमै उनीहरुबाट आमाको ममता खोस्यौ ? किन ज्याला मजदुरी गरेर खाने यि सोझा बुवालाई चो’ट माथि चोट दियौं ? प्रश्न सोध्छु, तर उत्तर पाउंदिन् । जब मैले थाहा पाएं, जुम्ल्याहा नानीहरु पाएको केहि दिनमै २१ बर्षकी आमा बित्नु भयो रे ।
ती दुई नानीहरुलाई दुध खुवाउने पैसा पनि छैन रे, भन्ने कुरा । कुदेर ती नानीहरु भए ठाउंमा पुगि हाले । नानीहरुको लागि दुध र औषधी उपचारका लागि एक आर्थिक सहयोग लिएर ।त्यहां पुग्दा, अवस्था सांच्चिकै दयनिय रहेछ । जुम्ल्याहा नानीहरुको बुवा रामेछापका बाबु तामांग आफुले प्रेम गरेर बिवाह गरेको श्रीमती गु’माउनुको पि’डामा दु’खी हुंदै बसिरहेका थिए ।
उनलाई चिन्ता थियो, छोरीहरुलाई दुध खुवाउने पैसा पनि छैन, अब कसरी बचाउने । लकडाउनका कारण यि जुम्ल्याहा नानीहरुले आफ्नो आमा गु’माए । जुम्ल्याहा छोरीहरु पाएको ११ दिनपछिको रातमा आमा सबिनाको मृ त्यु कसरी भयो ? क’हा’ली लाग्दो कथा छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
खुलामञ्चमा खाना बाँड्दै बाबुराम भट्टराई ; गरीब हरु खुशी हुँदै बाबुरामलाई दिए आशिर्वाद
तलवको सट्टा शिक्षकलाई हरियो तरकारी दिने सरकारको योजना